Tag: zvine hupenyu | Martech Zone
Tag: zvine hupenyu
Urarame Kutenderera Maitiro uye Statistics
Chipiri, August 1, 2017 Douglas Karr
Imwe yemapurojekiti edu gore rino ndeyekuvaka kunze-kutenderera-tafura mune yedu podcast studio. Isu tinogona chaizvo kushandisa imwecheteyo odhiyo michina tichiwedzera vhidhiyo. Midziyo yeVhidhiyo iri kudzika mumutengo uye mapakeji mazhinji ari kutanga kubuda nemakambani ehupenyu-vhidhiyo ekutarisira diki studio. Tiri kutarisira kutora angangoita matatu makamera uye nehurongwa hwekugadzirisa yakaderera-chetatu uye vhidhiyo kusangana kubva kumatafura kana software yemusangano. Kugamuchirwa kwekutanga kune